Ma dajiyaan kartaa file MP4 si aad u Adobe jilitaankii Pro CS4 / CS5 / CS3 / CS6? Waxaa si rasmi ah waxaa lagu sheegay in MP4 waxaa taageera Adobe jilitaankii. Sababtu waxa weeye in MP4 waa weel qaab la codecs kala duwan ah. Your codec file MP4 lama jaanqaadi Adobe jilitaankii. Si aad u xallin dhibaatadaada, waxaad u bedeli karaan MP4 video si jilitaankii qaab kale oo movie saaxiibtinimo sida MOV, MPEG-2, FLV iyo ka badan (Fiiro gaar ah: waxaa khuseysaa dhammaan noocyada kala duwan ee Adobe Ciyaar ay ka mid yihiin Adobe jilitaankii Pro, Adobe jilitaankii Pro CS3 / CS4 / CS5 / CS6).
Qeybta 1: Best MP4 in Adobe jilitaankii Converter
Qeybta 2: MP4 Free in Adobe jilitaankii Converter
Qeybta 3: MP4 Online in Adobe jilitaankii Converter
Qeybta 4: Su'aalaha ku saabsan Keenista MP4 in Adobe jilitaankii Pro
• Taageerada diinta qaab kasta oo ay taageerayaan Adobe jilitaankii, sida avi, MOV, flv, 3gp, MPEG-1/2, iwm
• Beddelaan videos at 30X xawaaraha ugu dhaqsiyaha badan iyo 100% video asalka ah oo tayo leh, ma video khasaaro tayo leh.
• Gubashada videos in disc DVD, DVD folder, ama in ISO files leh arrimo DVD menu free bixiyo.
• Ku dar metatata in video sida kuwa soo iibsatay ka Lugood aad.
Sida loo soo dhoofsadaan MP4 in Adobe jilitaankii la Video Converter Ultimate
Tutorial Tani waxay ku salaysan tahay Windows OS. Haddii aad tahay user Mac ah, fadlan isku day MP4 si Adobe jilitaankii Pro for Mac, Video Converter u Mac .
1. Import file MP4 video
Ka dib markii barnaamijka lagu rakibay, waxaad u iman doonaan inay interface cajiib ah. Hadda dari aad MP4 video files. Laba doorasho:
Jiid oo hoos u file MP4 inay ka tagay item saxaarad si toos ah.
Guji "Add Faylal ay" ku darto files MP4.
2. Dooro qaabka wax soo saarka xaq u
Dhinaca midig ee interface ah, waxaad doono "Qaabka Output" doorasho. Fur liiska qaab wax soo saarka, ka dibna waxaad arki doontaa laba qaybood: qaab iyo qalab. In qaabka, waxaad ka arki kartaa video, audio, HD, 3D, Web iwm waw, doorashooyin badan oo. Qalabka, waxaad dooran kartaa Apple, HTC, Samsung, magaca oo kaliya dhowr. Tani waxay si gaar u sahlan haddii aadan aqoon waxa qaab aad mobile / saldhiga ciyaarta / ciyaaryahanka taageertaa.
Fiiro gaar ah: waxaan dooran doonaa .MOV, taas oo ah mid ka mid ah adobe weerarkii cs3 / cs4 / cs5 / cs6 qaabab saaxiibtinimo pro, oo aad ka heli kartaa "qaab"> "Video". Dabcan, waxaad bedeli kartaa meel wax soo saarka si loo badbaadiyo file oo ku jira meesha aad doonayso inaad.
3. Start diinta Hadda
Hadda, waxaad ka heli wax waluba waa diyaar. Just guji badalo. Markaasaa waxaa u bilaabaa in uu si toos ah u sameeyaan shaqada qaab beddelidda, waxaad ka arki kartaa bar horumarka, oo guji joojin ama ka tago hadii loo baahdo. Hadda, aad si fudud u soo jiidi kartaa file u gediyay in adobe weerarkii cs3 / cs4 / cs5 / cs6 taabacsan, iyo samayno wax kasta oo aad u doonayaa inaan ku sameeyo. Waxa laga yaabaa inay si fudud, sax? Shifo.
Video Tutorial: Sida loo Isticmaalo MP4 si Adobe jilitaankii Video Converter for Windows
# 1. Free Video Converter: Wondershare MP4 Free in Adobe jilitaankii Converter
Waxaad isticmaali kartaa qalab si loogu badalo MP4 in Adobe jilitaankii lacag la'aan ah.
1. Waxa keliya oo kuu ogolaanaya in aad si loogu badalo 10 files ee 30X xawaaraha si dhakhso ah.
2. Waxa aanu taageeraan gubanaya videos in DVD.
3. The tayada wax soo saarka video kala duwan.
Su'aal:? Maxaa qaabab video waxaa taageera Adobe jilitaankii Pro
Adobe jilitaankii Pro taageertaa badan oo qaabab video, sida MP4, MPEG, MPE, Mpg (MPEG-1, MPEG-2), M2V (-waafaqsaneyn DVD MPEG-2), MTS ( AVCHD), MOV, FLV, AVI. Wixii macluumaad dheeraad ah, fadlan ka fiiri halkan .
Su'aal:? My video waxaa taageera Adobe jilitaankii Pro, laakiin weli waa aan la keeno karo galeen
Qaar ka mid ah qaabab video, waa arrinta codec. Waxaad u baahan tahay si loogu badalo qaab video aad u Pro saaxiibtinimo Adobe jilitaankii codec, sida MPEG-2 oo ah codec ugu wanaagsan ee la natiijooyinka ugu fiican marka la Adobe shaqeeya.
> Resource > MP4 > Sida loo soo dejinta MP4 Video galay Adobe jilitaankii Pro